ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ စော်ကားချက် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ စော်ကားချက်	January 3, 2009
(နအဖ၏ဥပဒေမဲ့ ယုတ်ကန်းမှုများ) ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ခု ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် ညနေ ၆ နာရီခန့်မှာ ညောင်လေးပင်ခရိုင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မအူပင်ရွာအနီး စောဘဲဒိုးတပ်စခန်းထိုင် နအဖတပ် ခမရ ၃၅၀ က ခွဲမှူးဗိုလ်သက်ခိုင် လက်အောက်ခံ စစ်သားတဦးက မအူပင်ရွာသူ ကရင်မိန်းကလေး မနီကဗျာ (၇ နှစ်) ကို နေအိမ်မှာ မုဒိမ်းကျင့်ပြီးနောက် သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လိုက် ပါတယ်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနယ်မြေ ဒူးပလာယာခရိုင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာ နအဖတပ် စကခ ၁၉ နည်းဗျူဟာ ၁ ရဲ့ နည်းဗျူဟာမှူးအဆင့်ရှိ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ချိုဟာ ခလရ ၁၀၆ တပ်စခန်းမှာ ဝါခမိကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘယ်လယ်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကနယ်ကမော့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒဲဖီးကျေးရွာအုပ်စု၊ တနေးလျူကျေးရွာအုပ်စု၊ ရူတောကျေးရွာအုပ်စုနဲ့ သဝေါဖျာကျေးရွာအုပ်စုတို့က အုပ်စုလူကြီးများကို ဆင့်ခေါ်စည်းဝေးပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်က စလို့ တပတ်ကို ၃ ရက် တပ်စခန်းသို့သတင်းပို့ဖို့နဲ့ ကားလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုလူကြီးကို ထောင် ၇ နှစ်၊ ကျေးရွာလူကြီးကို ထောင် ၂ နှစ်ချမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာ နအဖတပ် ခမရ ၅၈၇ တပ်ရင်းမှူး အဆင့်ရှိတဲ့ သန်းဝင်းကလည်း ကနယ်ကမော့-ဝါခမိ ကားလမ်း တလျှောက်မှာ တရက်ကို ရွာသား ၃၆ ဦး ကင်းစောင့်ခိုင်းပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီတိုက်ပွဲနေရာ ကင်းတာဝန်ကျ ရွာသားကို ထောင် ၂ နှစ်ချမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။
Insulting Karens on Karen New Year Day: SPDC junta’s lawlessness
On 2008 December 27, Karen New Year’s Day, at about 6:00 PM,asoldier from Lt. Thet Khaing’s Company in SPDC Army LIR 350 deployed at Saw Behldoe outpost near Ma-u-bin village in Nyaunglebin District Kyaukkyee Township rapedaseven-year old Karen girl named Ma Ni Kabyar at her home while her parents were away and then shot her to death. On December 16, in Mergui-Tavoy District Kasehdo Township Htee Bo-bwa Special Region, soldiers from SPDC Army IB 101 killed four villagers trading oxen and buffaloes at Kasawphoe and stole two oxen and two buffaloes. The murdered villagers were Saw Hser Thel (aged 35), Saw Dah Htoo Phoe (aged 18), Saw Hut Phloe (aged 16) and Saw Deedi (aged 40) all of whom came from Se-ku village.
In KNU territory Dooplaya District Kawkareik Township, Col. Khin Maung Cho, Commander of No.1 Tactical Operations Command of No.19 MOC summoned village tract elders to IB 106 camp and ordered them to report to the army camp three daysaweek starting from December 11th, also threatening them with prison terms if skirmishes broke out on the road in their respective vicinity. The elders were from Wahkami, Belemai, Kaneh Kamaut, Kyeh, Dellphee, Ta-nayliu, Ru-taw and Tha-wawphya village tracts. They were threatened with seven years in jail for village tract elders and two years in jail for village elders.
Similarly, Than Win, Commander of LIR 587, also issued orders for guarding of Kaneh Kamaut-Wahkami Road with 36 villagers every day, threatening them with two years’ prison sentences if battle broke out in their allotted sentry area.
—NCGUB – Border OfficePO Box 70Mae Sot, Tak63110ThailandPh: (+66)(0)55-532847Fax: (+66)(0)55-532847www.ncgub.net